Slides Sawiridda Ball dhalista
Slides daahan Powder
Albaabka Golaha Wasiirada
Birihii birihii & Accessories
Bamka Micro Gear
Aqoon isweydaarsiga Shirkadeena
Alaabtayada waxaa lagu iibiyaa saddex magac oo sumcad sare leh: YANGLI, GERISS, HIFEEL. Waxay yihiin nidaamka khaanadda, bogagga qarsoon, bogagga sita kubbadda, Slides -ka Miiska, dhejiska qarsoon, gacmo -qabadka, dhejiska foornada iyo qalabka kale ee alaabta guriga, kuwaas oo loo adeegsado alaabta guriga, armaajooyinka, qalabka guriga iwm ...
37-540mm Laba Jid Buuxo Ex ...
37-230 mm Fidinta buuxda ee ...
35mm Fidinta Keliya 2-Fol ...
Ahama Steel 430 square ...
Makiinada Kariyaha Kariyaha Gaaska ...
Ballaarinta Buuxda oo Jilicsan oo Jilicsan oo Jilicsan oo Loogu Talagalay Armaajooyinka Aan Fududayn
Ballaarinta buuxda ee jilicsan ee u dhow slide khaanadda hoosteeda ee armaajooyinka aan lahayn-16mm guddiga looxa ayaa badanaa u adeegsada jikada iyo armaajada musqusha. Noocan oo ka mid ah slide slide -ka hooseeyaa waxay isticmaalaan boolal la isku hagaajin karo iyo baakooyin caag ah oo lagu hagaajiyo khaanadaha alwaaxa. Lahaanshaha mashiinka TAIWAI oo aad u sarreeya, oo leh fikrad naqshadeyn heer sare ah kooxdayada farsamo ee aadka u fiican ayaa si taxaddar leh u soo saarta qalabka GERISS ee aadka u fiican oo ah xulashada ugu wanaagsan ee shirkadaha alaabta guryaha ee adduunka.
Qaabka No .: EUR33A
Fidinta Kelida ah ee Jilicsan ee Xidhan Qalin -Qarsoodiga Hoostiisa oo leh Boolal iyo Fiilooyin la hagaajin karo
Fidinta Fidinta Keliya ee Xirmo Dhabarka Qarsoon ee Shimbiraha leh Boolal la isku hagaajin karo iyo bareesooyinka ayaa badanaa u adeegsada armaajada jikada & musqusha. Noocan oo ka mid ah slide slide -ka hooseeyaa waxay isticmaalaan boolal la isku hagaajin karo iyo baakooyin caag ah oo lagu hagaajiyo khaanadaha alwaaxa. Lahaanshaha mashiinka TAIWAI oo aad u sarreeya, oo leh fikrad naqshadeyn heer sare ah kooxdayada farsamo ee aadka u fiican ayaa si taxaddar leh u soo saarta qalabka GERISS ee aadka u fiican oo ah xulashada ugu wanaagsan ee shirkadaha alaabta guryaha ee adduunka.
Qaabka No .: EUR23A
Dhinac Kordhin Buuxa oo Dhajisan oo Jilicsan Xiritaanka Siligga-dambiilaha Slide
Dhinac Fidin Buuran oo Dusha Jilicsan oo Xidhan Silsilad Xadhig Silsilad Slaydh badanaa loo isticmaalo armaajada jikada & musqusha. Silsiladda dambiisha siliggan waxay isticmaashaa boolal si ay u hagaajiyaan khaanadda dambiisha. Lahaanshaha mashiinka TAIWAI ee saxda ah, oo leh fikrad naqshadeyn sare leh kooxdayada farsamo ee aadka u fiican ayaa si taxaddar leh u soo saarta qalabka GERISS ee aadka u fiican oo ah xulashada ugu wanaagsan ee shirkadaha alaabta guryaha ee adduunka.
Qaabka No .: EUR33S
Jilicsan oo aamusan oo u dhow hoostiisa khaanadda qarsoon ayaa dheereyn buuxda la leh googoysyada hore
Aamusnaan jilicsan oo aad u hooseysa oo daboolan khaanad qarsoon oo dheereyn buuxda leh oo dhajiyaha hore badiyaa loo isticmaalo armaajada jikada & musqusha. Jid -gooyaha dhaadheer ee noocaan ah wuxuu adeegsadaa qaansooyinka hore si uu ugu hagaajiyo khaanadaha alwaaxa. Lahaanshaha mashiinka TAIWAI oo aad u sarreeya, oo leh fikrad naqshadeyn heer sare ah kooxdayada farsamo ee aadka u fiican ayaa si taxaddar leh u soo saarta qalabka GERISS ee aadka u fiican oo ah xulashada ugu wanaagsan ee shirkadaha alaabta guryaha ee adduunka.
Qaabka No .: EUR33B
Fidinta Keli ah ee Jilicsan ee Jilicsan Qalinka Qarsoon ee Dhexdeeda leh Xidhiidhiyeyaasha Hore
Fidinta Fidinta Keliya ee Jilicsan ee Jilib Qarsoon oo leh Isku -xirayaasha Hore ayaa badiyaa u adeegsada armaajada jikada & musqusha. Jid -gooyaha dhaadheer ee noocaan ah wuxuu adeegsadaa qaansooyinka hore si uu ugu hagaajiyo khaanadaha alwaaxa. Lahaanshaha mashiinka TAIWAI oo aad u sarreeya, oo leh fikrad naqshadeyn heer sare ah kooxdayada farsamo ee aadka u fiican ayaa si taxaddar leh u soo saarta qalabka GERISS ee aadka u fiican oo ah xulashada ugu wanaagsan ee shirkadaha alaabta guryaha ee adduunka.
Qaabka No .: EUR23B
Fidinta Buuxda ee Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa Jilicsan ee Xidhitaanka Qarsolaha Qarsoon ee leh Qaansooyinka Hore ee 3D
Kordhin buuxda oo isku mid ah oo dhaqaaqaya xiritaan jilicsan oo qarsoon oo ku ordaya khaanad khaanad khaanad leh oo leh garbaha hore ee 3D ayaa badiyaa u adeegsada armaajada jikada & musqusha. Jid -gooyaha dhaadheer ee noocaan ah wuxuu adeegsadaa qaansooyinka hore si uu ugu hagaajiyo khaanadaha alwaaxa. Lahaanshaha mashiinka TAIWAI oo aad u sarreeya, oo leh fikrad naqshadeyn heer sare ah kooxdayada farsamo ee aadka u fiican ayaa si taxaddar leh u soo saarta qalabka GERISS ee aadka u fiican oo ah xulashada ugu wanaagsan ee shirkadaha alaabta guryaha ee adduunka.
Qaabka No .: EUR33BS
Qaybaha Foornada Shiinaha ee iibka kulul leh Hinges Albaabka Foornada
Hordhac: Dhegta keli ah ee gaaska wax lagu karsado dhegta albaabkeedu waa bidix iyo dhinac midig waa 1 lammaane. Isticmaalka hiinge ee albaabada foornada wax lagu kariyo ee gaaska. Qalabka Geriss wuxuu ku habboon yahay qoyska, warshadaha iyo sidoo kale foornada korantada, gaar ahaan nooca albaabka oo culeyskiisu yahay 3 KGS - 15 KSGS in ka badan toban sano.
Lambarka Tusaalaha: YL-01
37mm Buuxin/saddex -laab ah telescopic channel bayonet buur slide slide
37mm Baahiyaha telescopic fidinta oo buuxa/saddex-laab ah bayonet buurta dhaansha khaanadda oo ay soo saartay xariiqda wax-soo-saarka oo sax ah iyo alaabta qalabka tijaabinta oo si aad ah u deggan oo siman. Ku saabsan slide slide -ka dhalista kubbadu waxay leedahay xoogaa kala duwan oo ah 17mm, 27mm, 35mm, 37mm, 45mm, 51mm, 53mm, 76mm. Dhererka waxaan awoodnaa sida waafaqsan shuruudahaaga si aan u soo saarno. Haddii aad xiisaynayso kanaalaheena telescopic, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto.
Qaabka No .: YA-3703
37-230 mm Sanduuqa aaladda fidinta oo buuxa kubbadda golaha wasiirrada oo sita bayonet buur slide
37-230 mm Sanduuqa aaladda fidinta oo buuxa kubbadda kabtanka oo sita bayonet buurta dhejiska oo ay soo saartay khadka wax-soo-saarka oo sax ah iyo alaabtii tijaabinta oo aad u xasilloon oo siman. Ku saabsan slide slide -ka dhalista kubbadu waxay leedahay xoogaa kala duwan oo ah 17mm, 27mm, 35mm, 37mm, 45mm, 51mm, 53mm, 76mm. Dhererka waxaan awoodnaa sida waafaqsan shuruudahaaga si aan u soo saarno. Haddii aad xiisaynayso kanaalaheena telescopic, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto.
Tusaalaha No .: YA-37HK-230
37-540mm Laba-Jid Buuxin Buuxin Buuralayda Mount Ball Dhajinta Qalabka Sanduuqa Qalabka
37-540mm Jidka laba-geesoodka ah ee ballaarinta bayonet-ka dhalada kubbadda santuuqa khaanadda sanduuqa oo ay soo saartay xariiqda wax-soo-saarka oo sax ah iyo alaabta tijaabinta oo ka shaqaysa xasilloonida oo siman. Ku saabsan slide slide -ka dhalista kubbadu waxay leedahay xoogaa kala duwan oo ah 17mm, 27mm, 35mm, 37mm, 45mm, 51mm, 53mm, 76mm. Dhererka waxaan awoodnaa sida waafaqsan shuruudahaaga si aan u soo saarno. Haddii aad xiisaynayso kanaalaheena telescopic, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto.
Qaabka No .: YA-37HK-540
Ballaarinta hoose ee buurta ku riix riix si aad u furto bogagga khaanadda oo leh qalab quful
Ballaarinta hoose ee hoose Buurta ku riix si aad u furto bogagga khaanadda khaanadda oo leh aaladaha qufulka sida caadiga ah loo isticmaalo armaajada jikada & musqusha. Jid -gooyaha dhaadheer ee noocan oo kale ah wuxuu adeegsadaa googoynta aaladda qufulka ee khaanadaha alwaaxa. Lahaanshaha mashiinka TAIWAI oo aad u sarreeya, oo leh fikrad naqshadeyn heer sare ah kooxdayada farsamo ee aadka u fiican ayaa si taxaddar leh u soo saarta qalabka GERISS ee aadka u fiican oo ah xulashada ugu wanaagsan ee shirkadaha alaabta guryaha ee adduunka.
Qaabka No .: EUR33D
Si buuxda u riix riix si aad uga furto hoosta bogagga khaanadda dhajinta oo leh biinanka la hagaajin karo
Fidinta fidinta oo buuxda si ay uga furto boggaga dhalada dhagaxa leh biinanka la hagaajin karo ayaa badanaa loo isticmaalaa armaajada jikada & musqusha. Noocan oo ka mid ah slide slide -ka hooseeyaa waxay isticmaalaan boolal la isku hagaajin karo iyo baakooyin caag ah oo lagu hagaajiyo khaanadaha alwaaxa. Lahaanshaha mashiinka TAIWAI oo aad u sarreeya, oo leh fikrad naqshadeyn heer sare ah kooxdayada farsamo ee aadka u fiican ayaa si taxaddar leh u soo saarta qalabka GERISS ee aadka u fiican oo ah xulashada ugu wanaagsan ee shirkadaha alaabta guryaha ee adduunka.
Qaabka No .: EUR33C
Diirada saar horumarinta iyo soo saarista qalabka qalabka guryaha
Cinwaanka Warshadda: No.10 Yonghe Road, aagga Warshadaha Renhai, Magaalada Leliu, Magaalada Foshan, Shiinaha.